Ifufe na-efegharị | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụdị ikuku ugwu nke a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe na mba anyị n'ihi oke ugwu ya.
N’abalị ihu igwe na-acha, ikuku na-agagharị na mkpọda ugwu ma ọ bụ ugwu ma gbadata na ndagwurugwu ebe ọ na-aga n’ihu na mbara ọzara. A na-akpọ ụdị ụdị a ifufe katabatic (sitere na Greek ma putara "ala"). Ọ na-ada n’abalị mgbe a na-eme ka ala dị mma site na radieshon.
Ikuku na kọntaktị na ala oyi ahụ na-ajụkwa oyi ma na-akawanye ikuku karịa ikuku gbara ya gburugburu; ya mere ike ndọda na-amanye gị ịgbada na mkpọda nke mbara ala ahụ a na-emekwa ka ikuku ikuku na-agbada. Ikuku na-anọgide na kọntaktị na ala oyi ma na-aga n'ihu na-efunahụ ikpo ọkụ; ya mere kpo oku abụghị adiabatic (ọ na-agbanwe okpomọkụ na ọkara) na ngagharị na-aga n'ihu.
N'ozuzu, ụdị ikuku a na-adịghị ike. Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe mkpọda ahụ kpọdara akpọda ma dịkwa nro, ọ puru iru ike dị ukwuu. Nke a bụ ihe na - eme mgbe elu mmiri kpuchiri snow ma ọ bụ ice, ihe a na - ahụkarị na Antarctica. Ọ bụrụ na ugwu dị nso n'oké osimiri ahụ, ikuku ugwu nwere ike ime ka ikuku dị ala sie ike n'abalị na-eme ka ifufe dị ike nke oke osimiri.
N'ikpeazụ, kwuo na ikuku ikuku bụ otu n'ime usoro dị mkpa maka ihe ịtụnanya ntụgharị ihu igwe, ebe ọ bụ na ikuku oyi site na ike ndọda ga-ejigide ya na ndagwurugwu, ọ̀tụ̀tụ̀ ikpo ọkụ dịtụ elu karịa elu ugwu ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ikuku catabatic